छवि–शिल्पाको सम्बन्धमा पूर्णविरामको संकेत- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
असार ३१, २०७६ रामजी ज्ञवाली
काठमाडौँ — पछिल्लो एक हप्ता नेपाली चलचित्रको बजार निर्माता छविराज ओझा र अभिनेत्री तथा उनकी धर्मपत्नी शिल्पा पोखरेलको झगडाले तताएको छ । सामान्य भनाभनपछि सुरु भएको उनीहरूको झगडा यतिमाथि पुगेको छ कि अब शिल्पा छविको घर फर्किने सम्भावना छैन । छविको मनमा समेत आशा मर्दै गएको छ ।
छविराज र शिल्पाको बिहे भएको तीन वर्ष पुरा भएको छ। उनीहरूको बिहे २०७३ असार २९ मा भएको थियो। तर उनीहरुलेसँगै रहेर तेस्रो वैवाहिक वर्षगाँठ मनाउन पाएनन्। लगभग २५ दिनअघि घर छोडेकी शिल्पालाई वैवाहिक वर्षगाँठको अवसरमा उनका श्रीमान् छविराजले ‘हृयाप्पी थर्ड एनिभर्सरी’ भनेर म्यासेज पठाए, शिल्पाको मोबाइलमा। यति मात्रै होइन उनले म्यासेजमा आउनुस् बसौँ, विगतका कुराहरू बिर्सिएर नयाँ किसिमले जिन्दगीको सुरुवात गरौँ समेत भनेका छन्। तर, शिल्पाको रिप्लाई आएन। हिजो मात्रै उनीहरूको फोनमा कुराकानी भएको छ। कुराकानीमा छविले ‘तपाईँ भएको स्थानमै आउँछु, बसेरै कुराकानी गरौँ’ भने। तर, शिल्पाले ‘म भेट्न सक्दिन,मेरो वकिलले भेट्छ’ भनेर जवाफ फर्काइन्।
उनीहरूको पछिल्लो गतिविधि नियाल्ने हो भने वैवाहिक सम्बन्धमा पूर्णविराम लाग्ने संकेत देखिएको छ। शिल्पाले छविसँग डिभोर्सको प्रक्रिया थालिसकेकी छिन्। तर, छविले शिल्पालाई घरको ढोका खुलै रहेको बताएका छन्। ‘५२ वर्षको उमेरमा ३ जना श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद भइसकेपछि शिल्पासँग जिन्दगी बिताउन सक्छु होला भनेर जिन्दगीका सबै थोक कम्प्रमाइज गरेर बिहे गरेको श्रीमती हो’, छविले भने,‘यदि शिल्पा पनि आफूलाई सच्याएर, बिहे गर्ने बेलामा आश्वासन दिलाए जस्तै मेरो बुढेसकालको सहारा बनेर बस्न सक्नुहुन्छ भने म पनि मेरा कमी कमजोरीहरु सच्याएर गान्धीवादी भएर बस्न सक्छु।’ उनले शिल्पालाई अरूका कुरा नसुन्न र घर फर्किन आग्रह गरेका छन्।
असार ८ गते छवि र शिल्पाबीच झगडा सुरु भएको हो। ११ बजे शिल्पा घरबाट निस्किइन्। ५ बजे पुनः घर आइन्। र, आफ्ना कपडा लिएर फेरी आफन्तकोमा फर्किइन्। त्यसको दुई हप्तापछि २२ गते टेकु प्रहरीले शिल्पाले घरेलु हिंसा अन्तर्गत उजुरी हाले पश्चात् छलफलका लागि छविलाई बोलायो। यस घटनापछि मात्र मिडियामा उनीहरुबीच बढिरहेको खटपट पहिलो पटक बाहिरिएको हो।
शिल्पाले लामो समयदेखि आफूलाई अनावश्यक शंका गर्ने, हरेक काममा रोक्ने र सधैँ झगडा गर्ने गरेको तथा निरन्तर झापडसमेत हान्ने गरेको बताएकी छिन्। उनले पछिल्लो समय छविले आफ्नो कानको जाली फुट्ने गरी झापड हानेपछि घर छोडेको बताएकी छिन्। तर, छविले भने यो आरोप मात्रै हो भनेका छन्। छवि भन्छन्,‘त्यो दिन कानको जाली फुटेको भए किन १५ दिनपछि उजुरी हालेको त? त्यसबीचमा विभिन्न पार्टीमा पुगेको थाहा पाएको छु।’
अन्याय त मलाई पो भएको छ : छविराज
यस घटनालाई लिएर धेरैले विभिन्न किसिमले व्याख्या गरेका छन्। कतिपयले यो सबैको कारण छविराज हो भनेका छन्, कतिले शिल्पा। छविले भने शिल्पा नभएर आफू अन्यायमा परेको बताएका छन्। ‘म पुरुष हो, ५५ वर्षको भएँ।
मेरो बारेमा को बोल्छ? जिन्दगीभर साथ दिन्छु भन्नुभएको थियो, अहिले यो के गरिरहनुभएको छ?’ उनले भने, ‘सधौ तीनवटा बिहे भएका र अघिका बिहे फापेन भन्दैमा जहिले पनि मेरो गल्ती हुन्छ?’ बिहेअघि तीनवर्ष डेटमा रहेका बेला सबै कुरा बुझेपछि बिहे बन्धनमा बाँधिएको बताउँदै उनले अहिले अनावश्यक रूपमा आरोप लगाएको बताए। ५५ वर्षका छविराजले आगामी समय पनि शिल्पासँगै बिताउन चाहेका छन्। शिल्पासँग डिभोर्स भयो भने आगामी समयमा कोही कसैसँग पनि बिहे नगर्ने बताए। छविले यसअघि तीनवटा बिहे गरिसकेका थिए। शिल्पा चौथो श्रीमतीको रूपमा छविको घर भित्रिएकी थिइन्।
शिल्पा भन्छिन्,‘डिभोर्स दिन्छु, छविको घर फर्किने छैन’
तीन वर्षदेखि माफी दिइरहेकी थिएँ तर अन्तिम समयमा पुलिस स्टेसनमा जान बाध्य भएँ, उनले भनिन्,‘अरू बेलामा घाँटी थिचेर छोड्नुहुन्थ्यो, तर अन्तिम समयमा घाँटी थिचेको थिच्यै गर्नुभयो र मैले खुट्टाले हानेर हिँडेकी हुँ।’ शिल्पाका अनुसार बिहे भएको एक महिनापछि घरमा झगडा सुरु भएको हो।
बिहे भएको एक महिनापछि विभिन्न किसिमका आरोप लगाउन सुरु गरेको, शङ्का गर्ने गरेको उनले बताइन्। छविले आफूलाई असाध्यै धेरै पिडा दिएपछि मात्रै डिभोर्सको कदम चालेको शिल्पाले बताइन्। ‘अब म खुसी भएर बाँच्न चाहन्छु’, उनले भनिन्,‘म धेरै रोएँ, धेरै सहे तर अब म घुम्न चाहन्छु, रमाउन चाहन्छु, पुरानै किसिमले जिन्दगी बिताउने रहर छ।’ शिल्पाले तीन वर्षदेखि आफू चुप रहेर बसेको र पछिल्लो समय मार्न खोजेपछि पुलिसको सहारा लिएको बताइन्।
दिनहुँ घरमा रोइरहेका बेलामा समेत कहिल्यै सहारा नदिएको, घुम्न निस्कने बेलामा समेत अनावश्यक टर्चर दिने गरेको, सामान्य विषयमा समेत झापड हान्ने गरेको शिल्पाको भनाई छ।
प्रकाशित : असार ३१, २०७६ १५:१३
असार ३१, २०७६ अजित तिवारी, सन्तोष सिंह
जनकपुर — प्रदेश २ को उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटन पूर्वाधारका लागि उपभोक्ता समिति मार्फत गरेको कामको मूल्याकंन होटेलमा बसेर गरिरहेको छ । दुई दिनदेखि जनकपुरको विभिन्न होटेल सर्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरू योजनाको मूल्याकंनको नाममा रकम असुलिरहेको खुलेको छ ।
जनकपुरको सिटी स्टार होटलको कोठा नम्बर २०५ र २०८ मा मङ्गलबार मन्त्रालयका कर्मचारी योजनाको मूल्याकंन गर्न व्यस्त देखिए। ल्यापटप र प्रिन्टर होटलको कोठामा राखेर कर्मचारीहरू योजना सम्पन्नको फायल हेर्दै मूल्याकंन गरिरहेका थिए। होटलमा प्रदेशसभा सांसद रानी शर्मा तिवारीसहित अन्य पनि थिए।
मन्त्रालयले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५० करोड रुपैयाँको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको छ। असार मसान्तको अन्तिम दिन भुक्तानीका लागि आएका उपभोक्ता समितिलाई होटलको कोठामै बोलाएर फायल सदर गर्ने काम भइरहेको छ। सोमबार पनि होटलबाटै काम गरिरहेको हल्ला भएपछि कर्मचारीहरू मङ्गलबार अर्को होटेल सरेका थिए।
‘मन्त्रालयमा ठाउँ नभएकाले होटलबाट काम गरिरहेका छौँ,’ नाम नबताउँदै होटेलमा भेटिएका कर्मचारीले भने,‘होटेलमा फायल हेरेर मूल्याकंन मात्र गरेको हुँ। अरू काम निर्देशनालयबाट भइरहेको छ।’ होटलमा पत्रकारहरु पुगेपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरू ल्यापटप र प्रिन्टर बोकेर हिँडेका थिए। सिटी स्टार होटलका रिसेपशनले रुम नम्बर २०५ र २०८ मन्त्रालयको नाममा नै बुक भएको जानकारी दिए।
पर्यटन पूर्वाधार योजनाको भुक्तानी लिन ठुलो सङ्ख्यामा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू होटल पुगेका थिए। होटलमा कामको मूल्याकंन गराउँदै उनीहरू फायल बोकेर मन्त्रालयका निमित्त सचिव जगदीश गुप्ताको कार्यकक्षमा पुगेर तोक लगाएर कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट चेक बुझिरहेका छन्।
स्रोतका अनुसार पर्यटनमन्त्री रामनरेश रायले भुक्तानीअघि सबै उपभोक्ता समितिबाट अनिवार्य १५ देखि २० प्रतिशत रकम लिन उर्दी जारी गरेकाले रकम असुल्न होटललाई रोजिएको हो। पैसा असुल्नकै लागि होटेल–होटेलमा कर्मचारी पठाएर सेवाग्राहीलाई दुख दिइरहेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू मन्त्रीसित रुष्ट छन्।
‘मन्त्रालयको काम होटलबाट गर्नुहुन्न। यो सम्बन्धमा धनुषाको सिडिओसँग कुरा गर्छु,’ प्रदेश २ का प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीले भने। धनुषाका सिडिओ प्रदीप कणेलले होटलबाट सरकारी काम गरिएको पाए सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही हुने बताए।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव गुप्ताले होटेलमा बसेर काम गरिरहेको कर्मचारी आफ्नो मन्त्रालयको नरहेको भन्दै तर्किए। ‘मन्त्रालयमा ठाउँको अभाव छैन। कर्मचारीकै लागि अर्को भवन पनि भाडामा लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘होटेलमा बसेर कर्मचारी काम गरेको कुरा सत्य होइन।’
प्रकाशित : असार ३१, २०७६ १४:४३